Dariiq Cusub Oo Loogu Wajahayo Baadhista Degdegga ah ee COVID-19 Oo Lagu Sharaxay Dahab
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Dariiq Cusub Oo Loogu Wajahayo Baadhista Degdegga ah ee COVID-19 Oo Lagu Sharaxay Dahab
Cilmi baadhayaashu waxay isticmaaleen nanoparticles dahab ah si ay u horumariyaan aalad cusub oo ogaanshaha unugyada unugyada taasoo si weyn u yaraynaysa wakhtiga loo baahan yahay in lagu ogaado COVID-19.
Faafidda degdegga ah ee COVID-19, oo ah cudur uu keeno fayraska SARS-CoV-2, ayaa abuuray dhibaato caafimaad oo dadweyne adduunka oo dhan. Ogaanshaha hore ee COVID-19 iyo go'doominta ayaa fure u ah xakameynta gudbinta cudurada iyo ilaalinta dadka nugul. Halbeegga hadda ee ogaanshaha COVID-19 waa falcelinta silsiladda transcriptase-polymerase (RT-PCR), oo ah farsamo lagu ogaado hidda-wadaha fayraska ka dib marka ay maraan wareegyo badan oo xoojin ah. Si kastaba ha ahaatee, farsamadani waa waqti-qaadasho, iyada oo abuuraysa dib-u-eegis tijaabo ah oo ku saabsan xarumaha ogaanshaha waxayna keenaysaa dib-u-dhac ku yimaada ogaanshaha.
Daraasad dhowaan lagu daabacay Biosensors iyo Bioelectronics, cilmi-baarayaal ka socda Kuuriya iyo Shiinaha ayaa soo bandhigay madal cusub oo nanotechnology ku saleysan oo soo gaabin karta waqtiga looga baahan yahay ogaanshaha COVID-19. Dusha sare ee Raman kala firdhinta (SERS) -PCR ogaanshaha madal-oo loo diyaariyey iyadoo la isticmaalayo nanoparticles dahabka (AuNPs) ee godadka Au 'nanodimple' substrates (AuNDSs) - waxay ogaan karaan hiddo-wadaha fayraska kadib 8 wareegyo oo xoojin ah. Taasi waa ku dhawaad ​​saddex-meelood meel tirada looga baahan yahay RT-PCR-ga caadiga ah.
RT-PCR-ga caadiga ah waxay ku saleysan tahay ogaanshaha calaamadaha fluorescence, marka 3-4 saacadood ayaa loo baahan yahay si loo ogaado SARS-CoV-2. Xawaarahani kuma filna marka la eego sida dhakhsaha ah ee COVID-19 u faafo. Waxaan rabnay inaan helno hab aan waqtigan ku dhimno ugu yaraan kala bar,” ayuu yiri Prof. Jaebum Choo, isagoo sharraxaya sababta ka dambeysa daraasadda. Nasiib wanaag, jawaabtu aad uma foga. Daraasad hore oo la daabacay 2021, kooxda Prof. Choo waxay samaysteen madal lagu ogaanayo sheeko cusub kaas oo calaamadaha SERS ee xasaasiga ah ay soo saaraan AuNPs si isku mid ah oo loogu habeeyey godadka AuNDSs iyada oo loo marayo farsamo loo yaqaan hybridization DNA. Iyadoo lagu salaynayo daahfurkan hore, Prof. Choo iyo kooxdiisu waxay horumariyeen habka cusub ee SERS-PCR ee ogaanshaha COVID-19.
Imtixaanka SERS-PCR ee dhawaan la sameeyay ayaa adeegsada calaamadaha SERS si loo ogaado "buundada DNA-da"-baaritaanno DNA oo yaryar oo si tartiib tartiib ah u burbura iyadoo ay jiraan hiddo-wadeyaasha fayraska ee bartilmaameedka ah. Sidaa darteed, shaybaarrada bukaannada laga helay COVID-19, uruurinta buundada DNA-da (iyo calaamadda SERS) waxay si joogto ah hoos ugu dhacdaa wareegyada PCR ee horumarka leh. Taas bedelkeeda, marka SARS-CoV-2 maqan yahay, calaamada SERS isma beddelo.
Kooxdu waxay tijaabisay waxtarka nidaamkooda iyadoo la adeegsanayo laba calaamadood oo bartilmaameedsanaya SARS-CoV-2, kuwaas oo kala ah, borotiinka baqshadda (E) iyo RNA-ku-tiirsanaanta RNA polymerase (RdRp) hiddo-wadaha SARS-CoV-2. Halka 25 wareeg loo baahnaa si loo ogaado RT-PCR-ku-saleysan, goobta AuNDS-ku saleysan ee SERS-PCR waxay u baahneyd oo kaliya 8 wareegyo, taasoo yareyneysa muddada baaritaanka. "Inkasta oo natiijooyinkayagu yihiin kuwo horudhac ah, waxay bixiyaan caddayn-fikrad muhiim ah oo sax ah SERS-PCR sida farsamada ogaanshaha. Farsamadayada SERS-PCR ee AuNDS-ku-saleysan waa madal cusub oo ogaanshaha unugyada oo si aad ah u gaabin karta waqtiga loo baahan yahay ogaanshaha hidda-wadaha marka la barbar dhigo farsamooyinka caadiga ah ee RT-PCR. Qaabkan waxa lagu sii balaadhin karaa iyada oo lagu darayo muunad otomaatig ah si loo horumariyo nidaamka ogaanshaha molecular jiilka soo socda,” ayuu yidhi Prof. Choo.
Runtii, SERS-PCR waxay noqon kartaa qalab muhiim u ah arsenalkeena ka hortagga masiibada COVID-19. Waxa kale oo ay abuuri kartaa isbeddel muuqaal ah oo ku saabsan baarista molecular, ka beddelka sida aan u ogaanno cudurrada faafa iyo wax ka qabashada cudurrada mustaqbalka.
Shiinaha Covid-19 DNA Korea
Xog Cusub oo Cusub oo Caafimaad oo Wanaagsan ee Bukaannada Qaba Kansarka Caloosha
CHOP Dhakhaatiirta Qalliinka Kala Saaran Mataanaha Isku-dhafsan ee Hadda Guriga Jooga
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan iibsan gaadhi koronto cusub...
Oggolaanshaha Dawooyinka Cusub ee Daawaynta Caabuqa indhaha...
Sanduuqa Kobcinta Dalxiiska Jamaica wuxuu u gogol xaarayaa Waddada...
Labyrinth-ka ugu Weyn Adduunka oo dhawaan dib loo furayo
Vail Resorts oo ku cusub Switzerland oo leh Andermatt Sedrun...
Suuqa la taaban karo ee Polymer ayaa qarka u saaran inuu ku koro 7.9% CAGR...
Chorus Aviation ayaa soo gabagabeysay la wareegida Falko...